သုံးသပ်ချက်များနှင့်ဟောကိန်းများ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2006 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 11, 2009 Douglas Karr
Problogger အခြားစိတ်ကူးကောင်းသည့် Group Writing Project တစ်ခုရှိသည်။ (သင်လည်းပါ ၀ င်နိုင်တယ်။ )
Darren ဟာ blogging အတွက်ကိုယ်ပိုင်နည်းပြလုပ်တာနဲ့တူတယ်။ ငါအပေါ်တစ် ဦး post ကိုတွေ့မြင်ခဲသည် Problogger ဒါကလုံးဝမူရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် Darren ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ်များပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်သည်ဟုထင်သည်
ဤအုပ်စုရေးသားခြင်းစီမံကိန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသို့မဟုတ်လာမည့်နှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များကိုဖန်တီးရန်စာရင်း၊ ငါအနည်းငယ်ဖန်တီးမှုဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်နှစ် ဦး စလုံးပေါင်းစပ်ကြိုးစားရန်။ အောက်တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ခန့်မှန်းချက်များကိုသာအာရုံစိုက်ပါ၊ ဘလော့ဂ်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီ၏ ဦး တည်ရာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသည်။
ပျော် အမြဲတမ်းအဖြစ်မှတ်ချက်များကြိုဆိုသည်။ နှင့်မှာခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ Problogger ဒါဆိုမင်းကတခြားလူတွေဘာတွေရေးနေသလဲစူးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။
Office Suites များ
ကွန်ပျူတာ OS Mods
XP နှင့်အတူ Intel Mac ကို
OSX ပါသော Intel ကွန်ပျူတာ
အီးမေးလ်ဝက်ဘ်နှင့် w ပေါင်းစည်းမဟာဗျူဟာများ
လိုင်းမှတဆင့်လိုင်း - ဆာဗာ
Virtual Domain ဆာဗာများ
REST API ကို
Reality Web ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဒီဇင်ဘာ 19, 2006 မှာ 1: 23 AM
Zune သည် မီဒီယာပလေယာဈေးကွက်တွင် များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို မမြင်သော်လည်း Doug ၏ ခန့်မှန်းချက်အများစုကို ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ အုပ်စုအရေးအသားပရောဂျက်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် ခန့်မှန်းချက်စာရင်းကို ရေးခဲ့သည်။
မင်းရဲ့နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကြောင့် ကံကောင်းပါစေ 🙂
ဒီဇင်ဘာ 19, 2006 မှာ 9: 44 AM
ကျွန်တော် Zune မှာ ခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ သေချာတယ်။ အထူးသဖြင့် ခရစ္စမတ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအတွက် iPod အချို့ကို ဝယ်ပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါ ငါ့ရဲ့ ရှည်လျားမှုပဲ။
ကံကောင်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ လိုအပ်တယ်။ အားလပ်ချိန်တိုင်း ဘလော့ဂ်ရေးရတာကြိုက်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေဖခင်ကြီးတွေကို ချစ်တဲ့ အသက် 25-30 အရွယ် သန်းကြွယ်သူဌေးဟောင်း မော်ဒယ်လ်တွေကို သိလား။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2006 မှာ 11: 30 AM
မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါတွေ့ရင် မင်းလမ်းကို ငါသေချာပို့ပေးမယ် 🙂
19:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 01 တွင်
အိုး၊ ဟောကိန်းတင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ငါနှစ်သက်သည်။ နယ်နိမိတ်များသည် စျေးနှုန်းကျလာပြီး Amazon ကဲ့သို့ အသုံးပြုထားသော ဈေးကွက်ကဏ္ဍအပါအဝင် အွန်လိုင်းရွေးချယ်ခွင့်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ရန်ပင် လိုအပ်ပါသည်။
ဒီပရောဂျက်မှာ ကျွန်တော်တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်၊ ရပ်လိုက်ပါ။ အခွင့်အရေးရရင်!
19:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 10 တွင်
အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေထဲက တစ်ခုနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုပါ။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို အခုပဲ စောင့်ကြည့်နေကြပါပြီ။
ကျွန်တော်လည်း thius ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါးကို သူ့ရဲ့နောက် post မှာ တင်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။
ငါ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ကျွေးနေတယ်။
19:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 22 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mama Duck Ashish ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
19:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 15 တွင်
2007 နှစ်ကုန်မှာ ဒီစာရင်းကို စစ်ဆေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ဒီဇင်ဘာ 20, 2006 မှာ 12: 00 AM
မင်းငါ့ကို သတိပေးရလိမ့်မယ်။ ငါ့မှတ်ဉာဏ်က ဒီလောက်ကြာကြာမခံဘူး။ 😉
ဒီဇင်ဘာ 20, 2006 မှာ 7: 00 AM
ကောင်းတဲ့ ခန့်မှန်းချက် ယောက်ျား... နဲ့ ဘလော့ဂ် ကောင်းတယ်..
ဒီဇင်ဘာ 20, 2006 မှာ 10: 21 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Madhur! ထိုသို့သော တုံ့ပြန်ချက်သည် ကျွန်ုပ်အား ဆက်လက်ရှင်သန်စေပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 21, 2006 မှာ 10: 26 AM
Wide Monitors - ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါကို မြင်နေပြီ။
Zune - ဟမ်၊ ငါတစ်ခုဝယ်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတယ်။
28:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 40 တွင်
Windows XP ကို ​​Mac OSX မှ ပြောင်းလိုက်သကဲ့သို့ iPod ကို Zunes ဖြင့် အစားထိုးထားသည်ကို တွေ့ရခြင်းမှာ ပျော်စရာဖြစ်သည်။
ပထမအရာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို အမှန်တကယ် မမြင်နိုင်ပါဘူး (ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဟုတ်ပါ) ဒါပေမယ့် ဒုတိယတစ်ခုက အမှန်ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(ဟေး၊ iPod တစ်ခုရှိ PC ပိုင်ရှင်များအားလုံး IntelMac ကို ယခုရရှိနိုင်ပြီး Microsoft ဆော့ဖ်ဝဲလ်အချို့နှင့် ထပ်တူပြုမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်မည်လား။ ဟမ်…)